खुल्ला प्रतिष्पर्धाकाे नाममा धमाधम कांग्रेस ! नतिजा अाउनु अगावै बधाई र खुशी साटासाट
न्यूज अभियान,काठमाडौं, २८ पुस । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) उपकुलपति नियुक्तितको विवाद नसिकिँदै काँग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरु धमाधम भर्ती गर्ने तयारी भएको छ।
नेपाली काँग्रेस निकट भिसी नियुक्ति गर्नासाथ उनीहरुलाई नियुक्तिको दिने तयारी गरिएको हो । त्यसैका लागि हालका रजिष्ट्रार भोला थापाले सबै प्रक्रियागत काम पूरा गरेका श्रोतले बताएको छ ।
स्कूल आफ आर्टस्, स्कूल अफ एजुकेसन, स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट लगायतमा एकै पटक दर्खास्त आह्वान गरिएको थियो । नाम चलेको राष्ट्रिय दैनिकमा दर्खास्त आह्वान गरेको भए पनि अधिकांस काँग्रेसनिकटलाई सर्ट लिस्ट गरी भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको थियो । एकैखाले विज्ञापन आह्वान गरे पनि डिनहरुले आफू अनुकुल व्यक्ति ल्याउन दोहोरो मापदण्ड समेत बनाएका छन् ।
स्कूल एजुकेसनका डिन महेशनाथ पराजुलीले आफ्ना नजिकका लाई भर्ती गर्न कार्यकारी परिषद्मा मापदण्ड परिमार्जन गरेका थिए । त्यसै गरी स्कूल अफ अार्टसमा समेत हालका रजिष्ट्रार भोला थापाले रामशरण महतका सल्लाहकार तथा कांग्रेस क्रियाशील सदस्यहरु उद्धव प्याकुरेल, निरज पौडेल तथा स्याङ्जाका चन्द्रलाल पाण्डेलाई नियुक्ति दिने तयारी गरेका छन् ।
यसै गरी आमसञ्चार विभागमा पूर्व भिसी सुरेशराज शर्माका भाञ्जा सुदर्शनप्रसाद दाहाल, होमनाथ दाहाल पुत्र सुधांशु दाहाल र एकप्रसाद दवाडी ल्याउने निश्चित भएको छ । होमनाथ दाहाल पुत्र सुधांशु दाहालले रजिष्ट्रार थापाबाट आफूले बधाइ समेत आइसकेको भन्दै खुशी साटासाट गरेका थिए ।
स्कूल अफ आर्टसका एक प्राध्यापकले भने यसरी आफ्नो मान्छे भन्दैमा रिजल्ट अगाडि नै भन्न नमिल्ने भए पनि केयूमा नातावाद हावी हुँदा यो अवस्था आएको बताए ।
विश्वविद्यालयमा एमाओवादीबाट भिसीका लागि प्रस्तावित जनार्दन लामिछानेले केयू काँग्रेसमैत्री रहेको बताएको केही समय बित्न नपाउँदै काँग्रेस निकट भोला थापाले काँग्रेसीलाई भर्ती गर्ने योजना बनाएका हुन् ।
गत जुन महिनामा आह्वान गरिएको विज्ञापनमा खुला प्रतिस्पर्धा भनिएपनि पुर्व योजना अनुसार आफ्ना आफन्त र कांग्रेसीहरुलाई मात्र सबै पदमा नियुक्ति दिने तयारी भएको सुत्रले बताएको छ ।
‘खुला प्रतिस्पर्धा भनिएकाले देश बिदेशमा शिक्षण र सोधको राम्रो अनुभव भएकाले आवेदन दिएपनि कुनै पनि पदमा बाह्य उमेदवारलाई छानिएको छैन, जुन सरासर भ्रस्टाचार हो’ एक प्राध्यापकले बताए ।
सबै पदमा आन्तरीकरुपमा करार सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई मात्र छानिएको र एक-दुइ दिनमै सोहीबमोजिम नतिजा सार्वजनिक गरिने ती प्राध्यापकले बताए ।
स्कुल अफ आर्ट्स र स्कुल अफ एजुकेसन अन्तर्गत थुप्रै अनुभवी र सक्षम प्रतिस्पर्धी रहे पनि बाह्य परीक्षकले दिएको अंकसमेत डिनहरु र हालका निमित्त उपकुलपति भोला थापाले टिपेक्स लगाएर मनोमानी गरेको बुझिएको छ ।
न्यूज अभियानका लागि समाधानबाट ।
वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा देवकोटाको निधनप्रति पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा समवेदना प्रकट
स्वर्गीय उपेन्द्र देवकोटालाई डा. बाबुराम भट्टराईको अन्तिम विदाई पत्र
गंगामाया अधिकारीको खस्कँदो स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह
काठमाडौँ उपत्यका : हरियो वातावरण खोज्नै गाह्रो